Kuhutshwe Ngeziginxi Nezimfijoli - Afropolitan Explosiv
Ngomhlaka 14 September 2019, uhlelo i-Artist Talk Series luphinde laqoshwa futhi khona e-Newcastle (KZN), endaweni yokunandisa i-Exclusive Baywash Lounge. Loluhlelo lethulwe i-Afropolitan Explosiv, inkampani edidiyelwa u-Dktl Thokozani Mhlambi, ongumqambi wamaculo kanye nomdlali we-Cello odabuka khona la e-Newcastle. I-Afropolitan Explosiv ibibambisene noMnyango wezaMasiko nobuCiko khona la KwaZulu-Natal. Kulohlelo, yilapho khona u-Dktl Mhlambi kanye nethimba lakhe besethulela amaciko ahlukile, njalo kanye ngenyanga.
Kusukela ekuqaleni kwayo, i-#Artist Talk Series isethulele amaciko afana noPalesa Shongwe ongumdidiyeli wama filimu, u-Dr Chris Jeffrey ongumqambi wamaculo, Katleho Shoro oyimbongi, Joao Orrechia, ongumqambi wamculo wamafilimu afana ne-Inxeba: The Wound kanye nomculi u-Thobe Of Heart.
Kulokhu, uDktl Mhlambi nethimba lakhe basithulele u-Ron Minor(Wandile Khoza) ongumculi, umbhali wamaculo kanye nomdlali wesiginci. U-Minor ube esesiphakela umculo wakhe, onesingqi esingajwayelekile ngapha ngasekhaya, kodwa sinomoya bonke abantu abakwazile ukuwuhabula masishane, babe sebecula kanye naye. Bekusho ingoma kwathokoza izinhliziyo kwamnandi kwanjeya ya! Kanti u-Ron Minor uphinde wathola ithuba lokuxhumana nabantu ngamunye ngamunye, lapho ababelane khona ulwazi ngomculo, ngezohwebo kanye nangezwekazi lethu i-Afrika. Umoya wase-Majuba usavungu igama lakhe namanje, kodwa kungcono ngoba uthembisile ukuthi uzophinde abuye futhi.
Audiences enjoy the evening.
Loluhlelo luphinde lwaba yithuba lokuthi nabaculi bala eMajuba basizwise nabo ukuthi bona bayivuba kanjani ingoma. Abasizwisile kube abaculi abenza uhlobo lwe-Hip Hop abafana no-LSD, Gardners Of Eden, RapDi Ba Bos. Kanti bekukhona no-dj abafana no-Mkwazer kanye ne-Nu’Ora Vibes. U-Dktl Mhlambi naye usichathazele ngowakhe umculo, nenye yezingoma zakhe ekuthiwa, Kulungile, evala lapha kwi-album yakhe entsha, ebizwa ngokuthi iZulu Song Cycle.
Lolusuku lee luzokhumbuleka njengosuku lokuzalwa kwezinto ezintsha la eMajuba, kakhulukazi ubudlelwane. Kube yimpelasonto lapho khona abathandi bomculo namaciko bakwazile ukuhlangana, banandise, baphinde baqinisekise ukuthi bazikhandela bona amathuma emisebenzi kulomkhakha womculo.§
(from left) organizer Dr Thokozani Mhlambi, guests Mr & Mrs Mayisela
KwaZulu-Natal Natal arts
Previous Article: Discovering the value of Creative Collaborations
Next Article Utalagu Exhibition by Durban Artists Amasosha